Mentorship – OLI
Namni barumsa argachuuf dirqama mana barumsaa qofa dhaquu hin qabu. Namni walirraa eddoofi haala garagaraa keessatti barachuu ni danda’a. Akkaataalee dandeettiifi beekkumsa keenya ittiin cimsannu keessaa inni tokko namoota waan hedduun nu dursan waliin hidhata godhannee irraa barachuudha. Biyyoota guddatan hedduu keessatti kuni adeemsa guddinaaf dagaagina ilmoo namaatiif sirriitti itti fayyadamu. Biyyoota guddachaa jiran keessatti garuu reefu baratamaa jira.
Sababa kanaaf gama OLItiin dargaggoonni keenya namoota muuxannoofi beekkumsa gahaa qaban waliin akka hidhata godhataniif carraan ni kennama. Carraa kanatti fayyadamuudhaan bu’aan barbaadamu akka argamus deeggarsa barbaachisu hunda ni taasisa.